Ithegi: iividiyo ezingqinayo
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Ngaba uyazi ukubaluleka kwentengiso yevidiyo kubukho bakho kwishishini lokuthengiswa kwezindlu? Nokuba ungumthengi okanye umthengisi, ufuna i-brand ethembekileyo neyaziwayo yokutsala abathengi. Ngenxa yoko, ukhuphiswano kwintengiso yezindlu luyoyikeka kangangokuba awunakukunyusa ngokulula ishishini lakho elincinci. Ngethamsanqa, ukuthengisa kwidijithali kubonelele ngamashishini abo bonke ubungakanani kunye nezinto ezininzi eziluncedo ukwandisa ulwazi lwabo lwentengiso. Ukuthengisa ividiyo
I-YouTube: Sisiphi isicwangciso seVidiyo yakho apho?
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Sisoloko sigxile kwizikhewu xa kufikwa kwisicwangciso sokuthengisa sedijithali sabathengi bethu. Iinjini zokukhangela ayisiyojelo nje lamashishini kunye nabathengi lokufumana iimveliso abazijongayo, ii-algorithms zikwangumqondiso obalaseleyo wegunya lophawu kwi-intanethi. Njengoko sihlalutya umxholo oqhuba uphawu kwi-brand, sithelekisa umxholo kwindawo nganye yomntu okhuphisana naye ukubona ukuba yintoni umahluko. Rhoqo, omnye wabo umahluko unjalo
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Iipesenti ezingama-60 zeendwendwe zesiza ziya kubukela ividiyo kuqala ngaphambi kokufunda isicatshulwa kwindawo yakho, iphepha lokufika, okanye ijelo loluntu. Ngaba ufuna ukwandisa ukuzibandakanya nenethiwekhi yakho okanye iindwendwe zewebhu? Veza ezinye iividiyo ezinkulu ekujolise kuzo kunye nokwabelana nabaphulaphuli bakho. I-Salesforce idibanise le infographic enkulu kunye neendawo kwiindawo ezi-7 zokubandakanya iividiyo ukuqhuba iziphumo zentengiso: Nika ividiyo eyamkelekileyo kwiphepha lakho le-Facebook kwaye uyipapashe